Pauro naSirasi Vanodzidzisa Murindi Chokwadi | Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (South Africa) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Irish Isoko Italian Kabiye Kabuverdianu Kannada Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Samoan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Telugu Thai Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uruund Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Murindi Wejeri Anodzidza Chokwadi
KuFiripi kwaiva nemumwe murandasikana aiva nedhimoni. Dhimoni racho raiita kuti musikana iyeye afembere, uye awanise vanatenzi vake mari yakawanda. Pauro naSirasi pavakaenda kuFiripi, musikana wacho akaita mazuva akawanda achivatevera. Dhimoni racho raiita kuti ashevedzere kuti: “Varume ava varanda vaMwari Wekumusorosoro.” Pauro akazoudza dhimoni racho kuti: ‘Muzita raJesu, buda maari!’ Dhimoni racho rakabva rabuda.
Vanatenzi vemusikana wacho pavakaona kuti vakanga vasingachawani mari kubva kwaari, vakatsamwa chaizvo. Vakazvuzvurudza Pauro naSirasi vakavaendesa kuvatongi vedzimhosva, vachiti: ‘Varume ava vari kutyora mutemo uye vari kukanganisa guta rese!’ Vatongi vacho vakarayira kuti Pauro naSirasi varohwe uye vakandwe mujeri. Murindi wejeri akavakanda mukatikati mejeri, achibva avasunga mumatanda.
Pauro naSirasi vakaimba nziyo dzekurumbidza Jehovha uye vamwe vasungwa vakanga vakateerera. Pava pakati peusiku, kwakangoerekana kwava nekudengenyeka kwenyika kwakasimba, kukazunungusa jeri kubva kumusoro kusvika kuzasi. Masuo ejeri akabva avhurika uye zvisungo zvakanga zvakasunga vasungwa zvakasununguka. Murindi wacho akamhanya mukatikati mejeri uye akaona kuti madhoo akanga akavhurika. Achifunga kuti vasungwa vese vakanga vatiza, akatora bakatwa kuti azviuraye.
Ipapo, Pauro akashevedzera kuti: ‘Usazvikuvadza! Tese tiri muno!’ Murindi wejeri akabva amhanya mavaiva, ndokupfugama pamberi paPauro naSirasi. Akavabvunza kuti: “Ndingaitei kuti ndiponeswe?” Ivo vakati: ‘Iwe nemhuri yako munofanira kutenda muna Jesu.’ Pauro naSirasi vakabva vamudzidzisa shoko raJehovha, uye murindi weJeri nemhuri yake yese vakabhabhatidzwa.
“Vanhu vachakubatai, vokutambudzai, vachikuendesai kumasinagogi nekumajeri. Muchaendeswa pamberi pemadzimambo nemagavhuna pamusana pezita rangu. Izvi zvichaita kuti mupe uchapupu.”​—Ruka 21:12, 13
Mibvunzo: Nei Pauro naSirasi vakaiswa mujeri? Murindi wejeri akadzidza sei chokwadi?